Ciidamada AMISOM oo kaabiga ku haya degmada Buurhakaba ee Gobolka Bay – idalenews.com
Ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa caawa kaabiga ku haya degmada Buurhakaba oo Istiraatiiji ah, kadib markii ciidamada ay shalay ka ruuqaansadeen deegaanka Leego ee Shabellaha Hoose oo bilihii la soo dhaafay ku sugnaayeen.
Sida ay sheegayaan wararka caawa naga soo gaaraya Buurhakaba Saraakiisha Al-Shabaab ayaa isaga baxay degmada, iyadoo dadka deegaanka uu soo wajahay cabsi, waxaana magaalada ka jira dareen.
Wararka ayaa sheegaya in saraakiisha Al-Shabaab ay u baxeen dhinaca Diinsoor, iyadoo maamulka dowladda ee Buurhakaba oo la socda Ciidamada huwanta uu sheegay in dagaal la’aan ku qabsan doonaan.
Ciidamada huwanta ayaa ku sugan Buundada Buurhakaba ama halka lagu magacaabo Jameeco oo u dhow degmada Buurhakaba, waxaana saraakiisha dowladda ay sheegeen inay gudaha u geli doonaan degmada.
AMISOM ayaa sheegtay inay isku furi doonto wadada isku xira Muqdisho iyo Baydhabo, si ay ammaanka wadadaas u xaqiijiso, waxaana ciidamada is garabsanaya ay yihiin kuwo wata gaadiidka dagaalka iyo Taangiyo.
Degmada Buurhakaba ayaa u jirta Baydhabo ilaa 100-KM, waxaana hadii Ciidamada AMISOM qabsadaan ay noqoneysaa degmadii u horeysay oo Gobolka Bay ay la wareegaan, inkastoo boqolaal askari AMISOM ay ku sugan yihiin Baydhabo oo sanadkii hore Ciidamada Itoobiya ka saareen Al-Shabaab.
Faah faahin laga helayo Xatooyo lagu sameeyay Xafiiska Taliyaha Hogaanka Socdaalka Soomaaliya